July 1, 2019 - CeleLove
July 1, 2019 Cele Love 0
နည်းနည်းတော့ကြမ်းချင်ကြမ်းလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့် ရေးရမှာပဲ ” နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့သာ နာကြပါ​တော့ခမျာ ” “ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်အုပ်ထားရမယ့်နိုင်ငံ” နည်းနည်းတော့ကြမ်းချင်ကြမ်းလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့် ရေးရမှာပါပဲ ၃တန်းအရွယ် ၄တန်းအရွယ်၁၀နှစ်ပတ်ချာလည်ယောက်ျားလေးတွေဟာSex movies ကြည့်တတ်နေပြီဆိုရင်သင်ယုံပါ့မလား….?? အလယ်တန်းကျောင်းသားအရွယ်မှာအိမ်ကအကိုတွေ ဦးလေးတွေရဲ့ညစ်ညမ်း စာအုပ်တွေကိုကျောင်းကိုယူလာပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မျှဝေဖတ်နေကြပြီဆိုသင်ယုံမလား….?? ဒါတင်မကသေးပါဘူး …။ အိမ်ကလူကြီးတွေ ဒါမှမဟုတ် တခြားလူကြီးတွေရဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုတွေကိုအမှတ်တမဲ့မြင်ဖူးတယ် တွေ့ဖူးတယ်ကျောင်းမှာအချင်းချင်းထိုကိစ္စတွေကိုပြောဆိုနေကြတယ်ဆိုတာသင်ယုံပါ့မလား …?? […]
သင့်မွေးရာသီခွင်အလိုက် သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့အချစ်ရေးပုံစံ လူတိုင်းက ခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတာကြောင့် အချစ်ကိုလည်း ခံစားတတ်ပါတယ်။ အချစ်ကိုလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းနေနေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေက အချစ်ကိုမလိုအပ်တာမဟုတ်ဘဲ သူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချစ်မျိုးမရလို့ဘာကိုမှမရွေးချယ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုရွေးချယ်ထားပေမယ့် အချစ်ရေးမှာအဆင်မပြေတာမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လိုအချစ်မျိုးလိုအပ်လဲဆိုတာ သိထားရင် ပိုပြီး စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့အချစ်ရေးမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရာသီခွင်အလိုက် လိုအပ်တဲ့အချစ်မျိုးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင် နော် […]
WISDOM HILL မှ လိင်အကြမ်းဖတ်ခံရသော သမီးငယ်လေးအမှု ဖော်ထုတ်ရန် မလွယ်ဟု CID ပြော
WISDOM HILL မှ လိင်အကြမ်းဖတ်ခံရသော သမီးငယ်လေးအမှု ဖော်ထုတ်ရန် မလွယ်ဟု CID ပြော နေပြည်တော်ရှိ Wisdom Hill ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွင် အသက် ၃ နှစ်မပြည့်သေးသည့် ကလေးငယ် မဖွယ်မရာ ပြုကျင့်ခံရသည့် အမှုသည် အများသူငါ ဝိုင်းဝန်းဝေဖန် ပြောဆိုနေသကဲ့သို့ ရိုးရှင်းမှု မရှိဟု […]
Song Hye-kyo အကြောင်း သင်မသိသေးတဲ့ အချက် (၁၃ ) ချက်
Song Hye-kyo အကြောင်း သင်မသိသေးတဲ့ အချက် (၁၃ ) ချက် ဆောင်းဟေကို ကတော့ မြန်မာပရိသတ်တွေကြားမှာ အွန်စော ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင် နဲ့ နာမည်ကြီး ခဲ့သူလေး ပါ။ တစ်ချို့ ပရိသတ်တွေကဆို သူမကို အခုထိ အွန်စော လို့ပဲ ခေါ် […]
ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့ VICTORIA အမှုမှတရားခံငါးဦး
ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့ VICTORIA အမှုမှတရားခံငါးဦး သက်ငယ်မုဒိမ်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လူမှုကွန်ယက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ နေပြည်တော် Wisdom Hill မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းအတွက် ကျူးလွန်သူတရားခံပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ပြည်သူများနှင့် အနုပညာရှင်များ အင်တိုက်အားတိုက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့လူတွေအတွက် ဒီနေ့ဟာတော့ အပျော်ရွှင်ရဆုံးနေ့ရက်တစ်ရက်ဖြစ်လို့ လာခဲ့ပါပြီ ….။ မိသားစု၎ ဦးနဲ့အတူ ဆရာမ N ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပြီလို့ […]
သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယား အမှုမှန်မပေါ်အောင် အဓိကကြိုးကိုင်သူမှာ ကျောင်းအုပ်ရဲ့အမဟု သိရ…
သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယား အမှုမှန်မပေါ်အောင် အဓိကကြိုးကိုင်သူမှာ ကျောင်းအုပ်ရဲ့အမဟု သိရ… နေပြည်တော် Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ့် မုဒိမ်းမှု မှာ …. လက်တလော အများပြည်သူ သံသယရှိနေတာကတော့ ၎င်း ကျောင်းအုပ်ပိုင်ရှင် ကိုပညာ ၏ သားများဟု ထွက်ပေါ်လျက်ရှိနေ ပါတယ် …။ ယင်းအမှု့မှန် […]
မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ မုန်တိုင်းသတိပေးထုတ်ပြန်ချက် …
မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ မုန်တိုင်းသတိပေးထုတ်ပြန်ချက် … ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၆:၃၀) နာရီအချိန်တိုင်းထွာချက်များအရ ယမန်နေ့က ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း (Low Pressure Area) သည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည် …။ အဆိုပါ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် ပိုမိုအားကောင်းလာကာ နောက် ၄၈ နာရီအတွင်း […]
နေပြည်တော်အမှုက တရားလိုကလေးမိဘတွေအပေါ် အထင်အမြင်မလွဲဖို့ ပြောလိုက်တဲ့ပန်ဆယ်လို
နေပြည်တော်အမှုက တရားလိုကလေးမိဘတွေအပေါ် အထင်အမြင်မလွဲဖို့ ပြောလိုက်တဲ့ပန်ဆယ်လို ဘယ်သူ့ကိုမှ စိတ်ဆိုးလို့ ရေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးဟာ အမှုမှန်ပေါ်စေချင်လွန်းလို့ မချင့်မရဲ ပြောမိတယ် ဆိုတာကို လည်း နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးမိဘတွေအပေါ် အထင်အမြင်မှားမိမှာစိုးလို့ ရေးတာပါ။ ဒီကျောင်းမှာတောင် ထားနိုင်တာ၊ ပိုက်ဆံရှိမှာပဲ။ ဘာလို့ အခုထိ သည်းခံနေတာလဲ။ […]
“အပျော်စီးရဟတ် လည်နေစဉ်ကျိုးကျခဲ့ပြီး လူသေဆုံးမှုဖြစ်ပွား (ရုပ်သံ)”
“အပျော်စီးရဟတ် လည်နေစဉ်ကျိုးကျခဲ့ပြီး လူသေဆုံးမှုဖြစ်ပွား (ရုပ်သံ)” ကစားကွင်းတစ်ခုတွင် ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်လည်သည့် အပျော်စီး ရဟတ်တစ်စင်း လူများလိုက်ပါ စီနင်းနေချိန်တွင် ထက်ပိုင်းကျိုးကျခဲ့တာကြောင့် လူစီးတွဲများ မြေပြင်ပေါ် ပြုတ်ကျခဲ့ပြီး အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦး သေဆုံးကာ အများအပြား ဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့ကြပါတယ် …။ အူဘက်ကစ်စတန်နိုင်ငံ […]
နှစ်ဦးပိုင်ဆိုင်မှု တွေကို ခွဲဝေယူကြတော့မယ့် ဆောင်ဂျွန်ကီနဲ့ ဆောင်းဟေကို
နှစ်ဦးပိုင်ဆိုင်မှု တွေကို ခွဲဝေယူကြတော့မယ့် ဆောင်ဂျွန်ကီနဲ့ ဆောင်းဟေကို ဘယ်တော့မှ လက်တွဲ မဖြုတ်ဖူးလို့ ပရိသတ်တွေ ထင်ခဲ့ကြတဲ့ Song-Song စုံတွဲ ကတော့ ရုတ်တရက်ကြီး ကွာရှင်းတော့မယ့် အကြောင်းကို ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကွာရှင်းမှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဂယက်တွေ လည်း အများကြီး ထခဲ့ပါတယ်။ဆောင်ဂျွန်ကီဘက်ကနေ ကွာရှင်းခွင့် အရင်တောင်းခံခဲ့တာပါ။ကွာရှင်းခွင့် တောင်းခံ […]